selminaz.com - ibhlog, iindaba
ezaposwa ngomhla 2021-05-26 Izilwanyana zivunyelwe
Ukutya kwee-cichlids: iintlobo, inani lokondla kunye neendlela
by wpUshiye uluvo kuKutya kwee-cichlids: iintlobo, inani lokondla kunye neendlela
Masiqale ngomzuzu olusizi. Kungcono ukuba umntu oqalayo ayeke itanki ye-cichlid. Ngoba? Ngenxa yokuba ezi ntlanzi zifuna umthamo omkhulu we-aquarium, zinoburharha, kunzima ukuzinyamekela. Kwaye okona kubalulekileyo - ukutya kweekhlhlidi. Kulula ukuyithenga, kodwa ngokujonga ubumnandi beli ...
Ungayikhetha njani i-aquarium: iikhrayitheriya, iifilitha, iikhomputha, umhlaba, iingcebiso kubaqalayo
by wpUshiye uluvo kwi Ungayikhetha njani i-aquarium: iikhrayitheriya, iifilitha, icompressors, umhlaba, iingcebiso zabaqalayo
Ukukhetha i-aquarium yakho yokuqala akukho lula. Ewe imeko yentlanzi ngokubanzi, intlalo-ntle yabo kunye nokuba baya kuba nayo na inzala ixhomekeke kwindlela ekhethwe ngayo inqanawa ngokwayo kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko kuyo.
Eli nqaku liza kubonelela ngeengcebiso ze ...
ezaposwa ngomhla 2021-05-26 Izixhobo
Ikhadibhodi elaminethiweyo. Inkcazo, iintlobo, izibonelelo
by wpUshiye uluvo kwikhadibhodi elaminethiweyo. Inkcazo, iintlobo, izibonelelo
Icandelo lephepha lihlala liphucula itekhnoloji yalo, likhupha iimveliso ezingaphezulu nangaphezulu. Ezi mveliso zibandakanya ibhodi elaminethiweyo, enesikhundla esomeleleyo kwimarike.
Ikhadibhodi elaminethiweyo luhlobo lwezinto ezigutyungelwe ngomaleko okhethekileyo ogudileyo owonyusa umgangatho weempawu zalo.
Iqhubekeka ngokuxineneyo ...
Kutheni le nto ikati ingcwaba ukutya: oonobangela abanokubakho kunye nendlela yokuyilumula
by wpUshiye uluvo kwi Kutheni le nto ikati ingcwaba ukutya: izizathu ezinokwenzeka kunye nendlela yokulumla
Kutheni ikati ingcwaba ukutya? Umbuzo awumangalisi, kuba le ndlela yokuziphatha ijongwa ikakhulu ezinjeni. Kodwa, njengoko kubonisiwe, ezinye iikati okanye iikati azami kungcwaba ukutya kwazo kuphela, kodwa zifihla nesitya esingenanto. Ukuziphatha okungaqhelekanga ekhaya ...
ezaposwa ngomhla 2021-05-26 iiholide
Yintoni ukuvuyisana noSvetlana kwisikhumbuzo sakhe?
by wpUshiye uluvo Ngoluphi uhlobo lokuvuyisana noSvetlana kwisikhumbuzo sakhe?
Uhlala ufuna ukuvuyisana nomntu wasetyhini ngeholide ngendlela yoqobo kwaye intle, ngakumbi xa kusenziwa isikhumbuzo. Kwaye yintoni enokuba yeyentsusa kunokudlala ngegama lakhe kwisicatshulwa sombulelo? Isicatshulwa esenziwe kusetyenziswa igama liza kushiya ngaphandle kwamathandabuzo malunga nokujolisa kokuvuyisana kunye ...
ezaposwa ngomhla 2021-05-26 Ukukhulelwa
Umlomo wesibeleko othambileyo ngexesha lokukhulelwa: kuthetha ntoni?
by wpUshiye uluvo kumlomo wesibeleko othambileyo ngexesha lokukhulelwa: kuthetha ntoni?
Ngexesha lokukhulelwa, amalungu omfazi enza utshintsho olukhulu. Ngeli xesha, oogqirha bayibeka esweni ngononophelo imeko yomama okhulelweyo. Uvavanyo lwe-gynecological lwenzeka kabini ukuya kathathu ngexesha lokukhulelwa konke, ukuba akukho zifo. Umlomo wesibeleko awuphazanyiswa kwakhona, kuba ulala kuwo ...
ezaposwa ngomhla 2021-05-26 abantwana
Ukuhamba kwegazi kwilindle kwiintsana: oonobangela, iimpawu ezihamba nazo, unyango, ingcebiso evela koogqirha babantwana abanamava
by wpUshiye uluvo kwimithombo yegazi kwilindle kwiintsana: oonobangela, iimpawu ezihamba nazo, unyango, ingcebiso evela koogqirha babantwana abanamava
Wonke umama onamava uyazi ukuba kufanele ukuba yintoni isitulo elusaneni. Ukuba, xa utshintsha ilweyile, kukho utshintsho kumbala welindle okanye ubukho bemigca yegazi, oku kufuneka kukwazise abazali. Ezo mpawu azisoloko zibonisa izifo ezinobungozi, kodwa kungcono ...
I-diaper cream "Mustela": uphononongo loomama
by wpUshiye uluvo kwi "Mustela" cream ilweyile: ncomo koomama
Namhlanje, ukhathalelo lwabantwana luhlala lubandakanya ukusebenzisa amanabukeni. Kuya kubonakala ngathi olu hlengahlengiso kufuneka lwenze ubomi bube lula kubazali. Nangona kunjalo, ii-diapers zihlala zibangela ukuqubuka kwe-diaper kunye neempendulo zokungabikho komzimba kwiintsana. Oku kunyanzela abazali ukuba bakhethe ngononophelo i-diaper cream. Kule …
Ukukhula kwe-HCG ngeentsuku emva kokumiliselwa: amanqaku, imigaqo kunye neengcebiso
by wpUshiye uluvo Ukukhula kwe-HCG ngeentsuku emva kokumiliselwa: iimpawu, imigaqo kunye neengcebiso
Abasetyhini abafuna ukukhulelwa bazi kakuhle ukuba yintoni i-chorionic gonadotropin (hCG okanye i-hCG). Le hormone iqala ukuveliswa kwangoko emva kokumitha ngempumelelo. Ukukhula kweHCG ngu kwiintsuku emva Ukumiliselwa kukuvumela ukuba ulandele ikhondo lokukhulelwa.
Ihomoni iveliswa zizicubu zomzimba. Inqanaba lakhe ...
Iklinikhi yezilwanyana "iDipper enkulu" eIzhevsk. Inkcazo, uphononongo
by wpUshiye uluvo kwiklinikhi yezilwanyana "Big Dipper" eIzhevsk. Inkcazo, uphononongo
Ukukhetha iklinikhi kunye nogqirha wesilwanyana sasekhaya, umnini onenkathalo ulahlekile kwiinkonzo ezahlukeneyo zonyango lwezilwanyana. Ezona khrayitheriya ziphambili zokhetho zezi: iinkonzo ezikumgangatho ophezulu, ubuchwephesha kunye namaxabiso afanelekileyo. Ukukhetha okungalunganga kunokuhlawula ubomi kunye nempilo yesilwanyana. Uphengululo malunga iklinikhi yezilwanyana “Kukhulu ...
"Stronghold" ezinjeni: ukuphononongwa, imiyalelo yokusetyenziswa, iidosi
by wpUshiye uluvo kwi "Stronghold" yezinja: ukuphononongwa, imiyalelo yokusetyenziswa, iidosi
Abanini bezinja abanomdla ngokungathandabuzekiyo bazama ukwenza ubomi besilwanyana abasithandayo ngokude kwaye bekhululeke kangangoko. Kodwa kuqhelekile ukuba izilwanyana zisulelwe ngamanye ama-parasites xa zihamba kwaye zidibana nezinye izilwanyana. Amathontsi "Stronghold" aqhelekile kubanini abaninzi, bahlala becetyiswa ukuba basebenzise ngoogqirha bezilwanyana. ...
Snot kusana olunenyanga: ukuba wenze ntoni?
by wpUshiye uluvo kwi-Snot kusana olunenyanga ubudala: ukwenza ntoni?
Wonke umama onothando uhlala emkhathalela umntwana wakhe kwaye uzama ukumkhusela kuzo zonke iinkathazo kunye namashwa. Nangona kunjalo, akusoloko kunokwenzeka ukukhusela umntwana kwiintsholongwane, ukusuleleka kunye nezifo. Rhoqo umntwana ukhula snot. Ingcinga yokuqala evela koomama abancinci: ...
Zingaphi kg ezinokuphakanyiswa ngumfazi okhulelweyo: iingcebiso
by wpUshiye uluvo Zingaphi kg ezinokuphakanyiswa ngumfazi okhulelweyo: iingcebiso
Ngexesha lokukhulelwa, owasetyhini kufuneka angacingi ngaye kuphela, kodwa nangomntwana wakhe ohlala kuye. Kungenxa yoko le nto ezinye izithintelo zivela ebomini, kufuneka zithathelwe ingqalelo. Masifumanise ukuba zingaphi i-kg umfazi okhulelweyo anokuphakamisa kwaye enze njani ngokuchanekileyo ...
Ukusasazwa okwenziweyo kwe-IVF eTula: amanqaku, iinkonzo kunye nokuphononongwa
by wpUshiye uluvo kwi-IVF insemination engeyiyo eTula: amanqaku, iinkonzo kunye nohlaziyo
In vitro fertilization, okanye, njengoko ibizwa njalo, IVF, kukudibana kweqanda, okwenziwa ngaphandle komzimba womfazi. Namhlanje yeyona ndlela isebenzayo yokoyisa ukungachumi emhlabeni.
Ngombulelo kukuveliswa okuphezulu kunye neendlela eziqhubela phambili, kunye nezixhobo zale mihla, kuye kwenzeka ukwenza inkqubo ...
Enkulisa "Goldfish", Kazan: idilesi kunye nohlolo
by wpUshiye uluvo kwi-Kindergarten "Goldfish", Kazan: idilesi kunye nokuphononongwa
Kungekudala, kusapho ngalunye apho kukho abantwana, isiganeko esibalulekileyo kubazali kunye nomntwana senzeka - ukungena enkulisa. Kwaye apha kuphakama imibuzo emininzi: uneminyaka emingaphi ukunika umntwana wakho, kwaye kungcono ukuba umshiye ...
Ngaba kunokwenzeka ukufudumeza ubisi kwi-microwave: inkqubo, ingcebiso, ukuphononongwa
by wpUshiye uluvo Ngaba kunokwenzeka ukufudumeza ubisi kwi-microwave: inkqubo, ingcebiso, ukuphononongwa
Akukho mama ufuna ukunika ukutya okubandayo umntwana wakhe. Ke ngoko, i-oven ye-microwave iza kunceda. Iisobho, izitya ezisecaleni, inyama kunye nezinye izidlo esele zilungile zifudunyezwa kuyo. Nangona kunjalo, ngaba ubisi lunokufudunyezwa kwimicrowave? Emva kwayo yonke loo nto, kwakudala kwakushushu kwisitovu ...
Ngaba kunokwenzeka ukuba wenze tattoo yamashiya kwabasetyhini abakhulelweyo: ingcebiso yeengcali
by wpUshiye uluvo on Ngaba kunokwenzeka ukuba wenze ishiya tattoo kubasetyhini abakhulelweyo: ingcebiso yeengcali
Umfazi uhlala efuna ukubukeka emhle, ngakumbi ngexesha lokukhulelwa. Abasetyhini abaninzi abayithandi imbonakalo yabo etshintsha ngokukhawuleza, imilo erhangqiweyo kunye nemeko yolusu. Rhoqo, oku kungenxa yokuthintelwa koogqirha kwiinkqubo eziqhelekileyo, ukuphikiswa okunomdla ...
Ubungakanani bomntwana 110: yeyiphi iminyaka efanelekileyo ngayo?
by wpUshiye uluvo kubungakanani bomntwana 110, yeyiphi iminyaka efanelekileyo ngayo?
Xa bethengela umntwana wabo iimpahla, kungekudala abazali bajongana nokumisela ubungakanani bezinto. Ukuba ebusaneni yonke into ibilula kakhulu: kulinganiswa ukuphakama komntwana okanye ubizwa nje ngokuba ngumdala- kwaye abathengisi baya kukhetha ukhetho olufanelekileyo, umdala umntwana, kokukhona kunzima ukufumanisa ...
Unyango lweempawu zokolula ngexesha lokukhulelwa: uphononongo. Ukuthelekiswa kwezona zilungiso zilungileyo zokufumana amanqaku
by wpUshiye uluvo kwizilungiso zamanqaku olula ngexesha lokukhulelwa: uphononongo. Ukuthelekiswa kwezona zilungiso zilungileyo zokufumana amanqaku
Ixesha lokukhulelwa lihamba kunye neenguqu ezininzi emzimbeni womfazi. Uhlengahlengiso olukhulu lomzimba lwenzeka, oko kuthetha ukuba kukho utshintsho oluthile kwinkangeleko. Ingxaki abajamelana nayo abafazi abaninzi ngelixa bephethe usana ziimpawu zokolula. Kweminye, bazibonakalisa ngokuqaqambileyo, kwabanye ...
Ubushushu babantwana: udidi, amanqaku kunye neempawu
by wpUshiye uluvo Ubushushu babantwana: ukuhlelwa, amanqaku kunye neempawu
Bonke abantwana bakhula ngokwenkqubo nganye kwaye bayafana ngokuyinxenye omnye komnye. Omnye ukhula ezolile kwaye enesidima, omnye uyaganga, owesithathu yile bathetha ngayo "umphefumlo wenkampani", kwaye owesine uziva ekhululekile yedwa. Namawele ahlukile kwindlela aziphethe ngayo, ...
Abicah grease with fluoroplastic "MS Sport": injongo, ukwakheka, iimpawu
by wpUshiye uluvo kwi-silicone grease nge-fluoroplastic "MS Sport": injongo, ukubunjwa, iimpawu
Izinto zokuthambisa zeSilicone kwimarike yangaphakathi yasekhaya zithengiswa kuluhlu olubanzi. Kwangelo xesha, iinkampani ezininzi, zombini ezaseRussia nezangaphandle, ziyabandakanyeka ekukhululweni kwezi mali. Ukuphononongwa ngokulingeneyo okuhle kubathengi bekufanelekile, umzekelo, yi-MS Sport silicone grease ene-fluoroplastic.
Kukhupha oku ...
I-non-stick Teflon mat - iimpawu zesicelo, izibonelelo
by wpUshiye uluvo kwi-Non-stick Teflon Mat-Iimpawu zoSetyenziso, iziBonelelo
Wonke umfazi wasekhaya ubuncinci kube kanye ebomini bakhe wajongana nemeko xa, xa ubhaka, umzekelo, ipayi yeapile, bekukho iingxaki ngokususa isitya esigqityiweyo kwisikhunta. Ngoku le ngxaki kulula ukusombulula. Kwaye ukhuseleko olukhethekileyo olungenantonga luza kunceda ...
Ungamphakamisa njani ophumeleleyo, okanye ngawaphi amacandelo?
by wpUshiye uluvo on Ungakhula njani uphumelele, okanye ngawaphi amacandelo?
Yintoni ephembelela ukwenziwa kweempawu zobunkokeli emntwaneni? Leliphi iziko lemfundo eliza kukufundisa ukuphumelela kuyo yonke into? Ngaba ootitshala banomdla wokuba umntwana aye kwizangqa nakumacandelo angaphandle kweeyure zesikolo? Impendulo ilula kakhulu kunokuba bekukholelwa njalo.
Ngubani oza kunceda ekukhetheni?
Kwenziwe ntoni ...
I-DIY rose headband
by wpUshiye uluvo Kwi-DIY rose headband
I-headband enomtsalane kwaye intekenteke, ehonjiswe ngee roses, iya kwenza ukuba ibhinqa libukeke lithandana ngakumbi. Kwiklasi ye-master engezantsi, siya kukubonisa ukuba uyenza njani into enjalo yobucwebe. Iibhanti ze-DIY rose kulula kakhulu ukuzenza. Imveliso ihonjiswe ngeentyatyambo ezili-19 kunye nesaluka esenziwe nge-satin ...
Ungawuphucula njani umgangatho weqanda ngaphambi kwe-IVF: iindlela ezifanelekileyo kunye neengcebiso
by wpUshiye uluvo malunga nendlela yokuphucula umgangatho weqanda ngaphambi kwe-IVF: iindlela ezifanelekileyo kunye neengcebiso
Enkosi kuphuhliso lweetekhnoloji zokuzala, abantu abaninzi bafumana ithuba lokuba ngabazali. IVF yenye yezona nkqubo zaziwayo nezisebenzayo. Kodwa nakwi-vitro fertilization ayisoloko ibonelela ngesiphumo esifunekayo. Isizathu soku ihlala ikumgangatho ophantsi wezinto zebhayiloji- iqanda. Kunjalo ngoba …
Umqamelo wentlanzi yoqobo: yokuphumla, ukudlala kunye noxinzelelo loxinzelelo
by wpUshiye uluvo kumqamelo wentlanzi yoqobo: yokuphumla, ukudlala kunye noxinzelelo lwexinzelelo
Ababephila ngelo xesha, ngakumbi abantu basezidolophini, bahlala kuxinzelelo oluqhubekayo. Ukunyanzelwa ukusombulula iingxaki zemihla ngemihla, cinga ngobunzima kusapho nasemsebenzini, bangena kumjikelo wokuhlanya koxanduva. Intlanzi enomtsalane-yokudlala intlanzi iyakunceda ukulungelelanisa imeko yoxinzelelo kunye nokuhombisa ngaphakathi: kangangoko kunokwenzeka ...
I-geophagus enentloko ebomvu: igama, inkcazo kunye nefoto, ukuzala, iimpawu zokugcina, imigaqo yokhathalelo kunye nokondla
by wpUshiye uluvo Kwi-geophagus eneentloko ezibomvu: igama, inkcazo ngomfanekiso, ukuzala, iimpawu zokugcina, imigaqo yokhathalelo kunye nokondla
Ayizizo zonke i-aquarist ezinamava eziyaziyo malunga nentlanzi efana ne-geophagus enentloko ebomvu. Ewe, abaqalayo abasandula ukufumana i-aquarium kwaye bethanda kuphela iiguppies ezilula, ii-swordtails kunye neon zihlala zingeva nokuva ngaye. Kodwa oku kuhle kakhulu kwaye kunomdla ...
Ikhasethi yekhasethi: inkcazo, ifoto, ubukhulu, injongo kunye nomgaqo wokusebenza
by wpUshiye uluvo Kwikhasethi yeTape: inkcazo, ifoto, ubukhulu, injongo kunye nomgaqo wokusebenza
Ngokufika kokurekhodwa kweaudiyo yedijithali, ikhasethi yekhasethi, njengezizalwane zayo (ii-diskettes ezineerekhodi ze-vinyl), kungekudala yajika yaba yimifanekiso enesitayile, ilahlekelwe yintsingiselo yayo yoqobo. Masingayibhali kwaye sive ukuba yenziwe njani kwaye kanjani ...
Ezona zibhedlele zibalulekileyo zokubeleka e-Ufa ngo-2018
by wpUshiye uluvo Ezona zibhedlele zibalaseleyo zokubeleka e-Ufa ngo-2018
Usuku lokuzalwa komntwana lixesha elinomdla nelichukumisayo ebomini balo naluphi na usapho. Yiyo loo nto oomama abakhulelweyo boyike kukhetho lwesibhedlele sokubeleka. Kuyenzeka ukuba kuququzelelwe ukhetho lwabazali bexesha elizayo ngenxa yenqanaba, elidwelise ezona zibhedlele zibalaseleyo zokubeleka e-Ufa, iidilesi zamasebe kunye neemeko ...
Intaba yefowuni Magnetic: inkcazo kunye neempawu
by wpUshiye uluvo Kwifowuni yeMagnetic mount: inkcazo kunye neempawu
Ukuhamba ligama eliphambili ebantwini ngenkulungwane yama-XNUMX. Abemi bayakonwabela ukusebenzisa izithuthi zakho kunye nezixhobo ezininzi, kwaye i-smartphone inokugcina ubomi bonke! Kuphela xa uqhuba, ukubukela iividiyo ezihlekisayo okanye ukukhangela umkhondo owuthandayo akuvumelekanga ngumthetho: izandla ziyafuneka ...
Page 1 Page 2 ... Page 675 Okulandelayo Page
Umxholo weAmphibious ngu ItemplatePocket ⋅ zeSITA WordPress